ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်ဖြစ်စဉ်များအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ "Incident Handling and CSIRT Management" သင်တန်းကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၌ ယနေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်။)
Facebook က သင်၏ 2FA (Two-factor Authentication) ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် သင်၏ဖုန်းအဆက်အသွယ်များကို စုဆောင်းခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းတော့မည်
Facebook ကိုဝင်ရောက်ရန် သင့်ဖုန်းကို အသုံးပြုသည့်အခါတွင် ကုမ္ပဏီက သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို မှတ်လိုက်ပြီး ၎င်းဖုန်းနံပါတ်အား ‘Friends Suggestion’ ၌ အသုံးပြုသည်ကို သင်သိပါသလား။ ဤအကြောင်းကို ယခုအပတ်အတွင်း၌ ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီကြီးက ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမတိုင်ခင်ထိ အခြားသူအများစုက ဤအကြောင်းကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ . သုံးစွဲသူများက ၎င်းတို့၏အကောင့်ကို ဒုတိယလမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်နိုင်မည့် 2FA စနစ်အား Facebook ကဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ Username နှင့် Password ပေါ် လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေရမည့်အစား သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် 3rd Party App တစ်ခုခုမှထုတ်ပေးသည့် Login ကုဒ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့ဖုန်းဆီသို့ SMS မှတဆင့် ရောက်ရှိလာသောကုဒ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝင်ရောက်နိုင်ရန် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်။)
Emotet Trojan က သင့်အား အန္တရာယ်ရှိသော ခရစ္စမတ်ပါတီသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း
အားလပ်ရက်များနှင့် အချိန်ကိုက်ဆိုသလို Emotet trojan ဖြန့်ချီသောအဖွဲ့သည် ခရစ်စမတ် theme များ သုံးထားသည့် အီးမေးလ်များကို စတင်ပေးပို့လိုက်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ attachment များက သင့်ကို ဖွင့်ဖတ်အောင် ဆွဲဆောင်ကာ ကူးစက်တိုက်ခိုက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ၎င်းတို့က မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့က သင်၏ပုံဆိုးပန်းဆိုး ခရစ်စမတ်ဆွယ်တာကိုပင် ထုတ်ဝတ်စေချင်နေပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်။)
Customer ၁၅ သန်း၏အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရယူရန် LifeLabs သည် ဟက်ကာများအား ငွေပေးချေ
အချက်အလက်ကျိုးပေါက်မှုသည် နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု ရလဒ် ၈၅,၀၀၀ ကိုလည်းဟက်ကာများမှရရှိခဲ့သည်။ . ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော LifeLabs သည် ပြီးခဲ့သည့်လက လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုတစ်ခုအတွင်း ခိုးယူထားသောအချက်အလက်များကိုရယူရန်အတွက် ဟက်ကာများအား ငွေပေးချေခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သည်။
APCERT Online Training တွင် mmCERT/cc က ပို့ချ
Asia-Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT) များအား အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများအား ပို့ချခြင်းအနေဖြင့် mmCERT/cc အနေဖြင့် ယနေ့နံနက် ၀၈၃၀ နာရီမှ ၀၉၃၀ နာရီထိ "Zero Day Malware - Static Analysis" သင်ခန်းစာအား ပို့ချခဲ့ပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်)
STOP Ransomware (.ntuseg) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.ntuseg) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: qzVmsmPsBbMag5eclxPzsGPYPtD0idScDzpGvxt1 Password: amQELLhV5K3pFyZmtUn4xI0NUfDcPQNgq4BC6yt2
This vulnerability allows remote attackers to execute arbitrary code on affected installations of Samsung Galaxy S10 Firmware G973FXXS3ASJA, O(8.x), P(9.0), Q(10.0) devices with Exynos chipsets.
This vulnerability allows network-adjacent attackers to bypass authentication on affected installations of D-Link DAP-1330 1.10B01 BETA Wi-Fi range extenders.
This vulnerability allows network-adjacent attackers to bypass authentication on affected installations of D-Link DAP-2610 Firmware v2.01RC067 routers.
Certain Xerox WorkCentre printers before 073.xxx.000.02300 do not require the user to reenter or validate LDAP bind credentials when changing the LDAP connector IP address.
Gogs through 0.11.91 allows attackers to violate the admin-specified repo-creation policy due to an internal/db/repo.go race condition.